कांग्रेस नेता प्रकाश शरण महतलाई कारबाहीको माग गर्दै सानेपामा उजुरी
असोज १, काठमाडौं । पार्टीको जनाधार बलियो हुँदाहुँदै व्यक्तिगत प्रतिसोध साँध्नका लागि आफुहरुलाई हराउने खेल खेलेको भन्दै नेपाली कांगे्रसका केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफुहरुलाई असहयोग गरेको भन्दै नुवाकोटका विभिन्न गाउँपालिका र वडाका उम्मेद्धारहरुको समुहले कारबाहीको मागसहित आइतबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा सो उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफुहरुलाई पराजित गराउन र पार्टीलाई क्षति पु¥याउने नियतले डा. महतको प्रत्यक्ष निर्देशनमा उत्तम पाठक, केशराम तामाङ, सुमन डंगोललगायतले असहयोग गरेको र विपक्षी पार्टीका उम्मेद्धारलाई मतदात गर्न लगाउने जस्ता हर्कत गरेको उनीहरुको आरोप छ ।